WAR SAXAAFADEED: KOMISHANKA QARANKA JAMHUURIYADDA SOMALILAND | Toggaherer's Weblog
WARAYSI UU SIIYEY DAAHIR RIYAALE SUB-SAHARA
MAAMULKA KISMAAYO OO SHEEGAY IN UU XIDHIIDH KA DHAXEEYO ALQAACIDA SOONA DHAWEYEY HADLAKII OSAMA
WAR SAXAAFADEED: KOMISHANKA QARANKA JAMHUURIYADDA SOMALILAND
Posted by: toggaherer on: March 22, 2009
Shir ay isugu yimaadeen Xubnaha Guddida Kormeerka Doorashooyinka (electoral Moniotoring Board) oo ka dhacay Xarunta Komishanka maanta oo ay taariikhdu tahay March 22, 2009, waxa lagu falanqeeyay xaaladaha doorashooyinka Madaxtooyada ee soo socda iyadoo tixgelin gaar ah la siinayo xilgudashada Komishanka, doorka Xisbiyada iyo kaalinta Xukuumadda.
Si loo dheeli tiro dadaalka loogu jiro hab-u- socodka doorashooyinka waxay Guddidu ka fursan wayday inay mid-mid u tilmaanto wixii ula muuqday in ay dhaliyeen murugga siyaasadeed ee taagan.
1. In kasta oo komishanka ay kaga baxday lacag badani wacyi-gelintii Diiwaan-gelinta haddana taasi waxay noqotay hal bacaad lagu lisay. Waxay gabtay in muwaadinka ka dhaadhicisio in waxa keliya ee laga rabaa yahay:
* Inuu hal mar oo keliya iska diiwaan-geliyo goob codbixineed oo keliya buuxinayana shuruudaha diiwaan-gelineed ee laga rabo.
2. Komishanka oo gafay inuu xakameeyo khaladada si cad u soo ifbaxay markii hawlgalka diiwaan-gelinta ugu horeesay ee Gobolka Saaxil laga soo jeestay taas oo sababtay inay khaladadaasi ku sii fidaan gobolada oo idil.
3. In kastoo Komishanku leeyahay awood uu ku cayimo maalinta doorashadu qabsoomayso, haddana waxaa taagnaa heshiiskii 9/4//2008 ee Komishanka iyo Saddexda Xisbi Qaran wada galeen oo qoddobkiisa 6aad sidan u dhignaa:
“ Haddii dib-u- dhac ku yimaaddo doorashada Madaxtooyada saddexda, Xibsi Qaran iyo Komishanka ayaa si talo wadaag ah isula ogolaaday waqtiga doorashada la qabanayo. Waqtigaas oo Guurtiduna sidiisa ku ansaxin doonto”.
Sidaa darteed Komishanku wuu jabiyay ballankaa markii uu si gaar ah ugu dhawaaqay in Doorashada dhacayso 31/5/2009.
Waxa iyana afgarad taagan ahayad in Komishanka, saddexda Xisbi Qaran iyo Interpeace oo ah dhinacyada doorashooyinka ku lug leh oo dhammi goob-joog ka ahaadaan mar walba oo serverka la hawl-geliyo. Komishanka iyo Interpeacena afgaradkaa way jabiyeen markii ay soo saareen natiijooiyinka la xidhiidha diiwaan-gelinta oo aan loo dhamayn.
Intii dhacdadaa ka dambeesay waxa Komishanku gartay in saddexda xubnood oo Guddida Anshaxa ka tirsani ku biiraan goob-joogayaasha hawl-galka Serverka.
2. Xisbiga Kulmiye:
a) Xisbiga KULMIYE wuxuu daraf ka ahaa Heshiiskii 9/4/2008 ee dhexmaray Komishanka iyo
sadexda Xibsi Qaran. Heshiiskaa oo hore u meel dhigay inay wadajir iyo is afgarad lagu qabto wakhtiga doorashada haddii dib-u-dhac ku yimaaddo doorashada Madaxtooyada.
Xisbbiga KULMIYE muddaadaa sannad ku dhawaadka ah ee la xidhiidha muddo kordhintii Madaxtooyada wax dareen ah inay doorashadu qabsoomayn 29/3/2009 may muujin. Sidaa darteed gacan-saydhka KULMIYE ee wakhtigani wuxuu duudsiyayaa ballan qaadkii ahaa in arrintan oo kale markay timmaaddo Saddexda Xisbi Qaran iyo Komishanku wadajir go’aan uga gaadhaan.
2. Ololaha Joogtada ah ee dhinacyada badan ee Xibiga KULMIYE wakhtigan wadaan waa
mid hororsi leh oo lid ku ah xeerarka Doorashada.
3. XISBIGA UDUB:
1. Tvga Soomaaliland iyo Radio Hargeysa waa Hanti Qaran oo loo siman yahay. Waxaa khalad biyo kama dhibcaan ah awoodda gaarka ah ee Xibsiga UDUB u leeyahay ku adeegsiga TV_ga iyo Radiyowga Qaranka.
2. Waxaa kale oo khalad ahayd taageeradii deg-degga ahayd ee Xisbiga UDUB siiyay Komishanka markii Komishanku u qabteen May 31, 2009 maalinta doorashadu qabsoomayso taas oo tixgelin la’aan ku ahayd heshiikii 9/4/2008 ee u taagnayd saddexda Xisbi Qaran iyo Komishanka si cadna qeexayay in maalinta doorashada si wada jir ah oo talo wadaag leh arrintaa darafyada ay khusayso u dhameeyaan.
3. waxaa jirta ah in qoddobka sideedaad (8aad) ee heshiiskii 9/4/2008 ee ahaa in saddexda xisbi Qaran sameeyan guddi isku dhaf ah oo farsamo, hawshooduna tahay inay dhigto jaangooyo ay ku wada shaqeeyaan Xuluumadda iyo Axsaabta Mucaaradka ah ka fuli wayday dhinaca xisbgia UDUB.
4. Waxaa iyana khalad hororsiga xisbiga UDUB ee joogtada ah taas oo ka soo horjeeda amarka Komishanku arrintaa ka bixiyay.
+ XISBIGA UCID
UCID waxay eedayn ku leedahay xisbigooda oo olole aan wakhtigiisii la gaadhin wada.
Dhaliilaha Saddexda Xisbi:
Waxay guddidani ku eedaynaysaa saddexda XisbiQaran marka qalalaase siyaasadeed dalka soo food saaro ee ay sii huriyaan halkii ay ka dejin lahaayeen.
Waxaa walaaceeeda leh wasiirka xil qaran haya ee awooddiisii qaranimo iyo wakhtigii uu xilka qaran ku gudan lahaa ku luminaya olole xisbi. Mar haddi aynan xukuumaddu ahayn “Parliamentary Government” oo dooorashada xisbiga ku timi waxay tahay in si cad loo kal saaro ciddii Xisbal Xaakimka u wadi lahayd arrimaha Xukuumadda iyo tan Xisbiga UDUB.
Waxaa habboon sidii aynu ku soo caano maalay in inta arrin qaran oo waanwaan leh taagan tahay in laga ilaaliyo wax carqalad ku noqda.
6) FIIRO GAAR AH
1. Iyadoo diiwaan-gelintii gobolka Awdal Komishanku ka faraxashay oo tabaabushihii
Maroodi Jeex Hargeysa) lagu jiro ayaa falkii Argagaxisnimo, ee khasaaraha culus lahaa
dhacay. Waxay noqotay marka in hawshii diiwaan-gelinta ee dalka ka socotay hakad gasho
muddo soddon(30) cisho ah.
2. Markii diiwaan-gelintu soo gaba-gabooday iyo intii ay socotayba waxaa soo if baxayay xadgudubyo diiwaan-gelinta la xidhiidha ha ahaato iyadoo dhawr jeer muwadinku is diiwaan-geliyo shuruudihi diiwan-gelinta oo lga talaabsaday, sida dad aan faro laga qaadin. Dhibtaa iyada ahi dib u raac ma leh oo mid eedeeda loo dhammaa hadday tahay Komishanka, Axsaabta ama Bulsho weyntaba. Waxaa ka nool sidii loo saari lahaa dhibtaa halkaa ka timid.
Nasiib wanaag serverka hawshan loogu talo galay inuu kala hufo sida diiwaan-gelintu u dhacday awood buuxda ayuu u leehayay inuu markiiba soo dhufto muwaadinka dhowr meeelood iska diiwaan-geliay raacayana shuruudihii diiwaan-gelinta.
Waxaa markaa loo baahday in qalab serverka lagu soo kordhiyo lagu xakameeyo dadka ka talaabsaday shuruuudihii diiwaan-gelinta gaar ahaan intii aan faro laga qaadin. Qalabkani wuxuu halkan soo dhigayaa wejiga qof kasta oo aan mugdi, madow iyo meermeer kale ku jirin. Waxaa qalabkaas hawshiisu tahay inuu soo saaro sawirada dadka aan faraha laga qaadin iyo inta jeer ee qofka sawirka lihi is diiwaan-geliyay.
Komishanka waxaa kaga lumay 40 cisho intii qalabkan la sugayay lana hawl-gelinaayay. haddaba haddaynu isu soo min guurinno 30 cisho ee hore ee ku lumay Qaraxayadii iyo 40 cisho ee qalabka lagu keenay waxay isku noqonoyaan 70 cisho.
Iyana aan eegno muddada ku dhex jirta 29/3/2009 ee ahayd in doorashadu dhacdo iyo May 31keeda ah ee ah taariikhad cusub ee Komishanku u cayimeen in doorashadu qabsoonto:
March 2 casho oo ka hadhay
April 30 Casho
May 31 Casho
Isgeyn 63 casho
Wakhtigii labada dhacdo ee kor ku xusan ku lumayna waa: 70 casho
Taasi waxay ina tusaysaa in Komishanku wakhtigii ka lumay ee 70 cisho ahayd ka tageen 7 cisho markay taariikhda cusub ee cayimeen.
Ha la ogaado inta uu laalan yahay go’aan loo dhan yahay doorahaduna way sii durkaysaa!
Waxaa iyana halkan xusuus mudan in haddii doorashadu dhici lahayd 29/3/2009 Madaxweynaha la doortaa markaa wuxuu kursiga ku fadhiisan lahaa May 4, 2009.
Markay tahay in doorashadu dhacdo May 31, 2009, Madaxweynaha la doorto waxuu kursiga ku fadhiisanayaa July 1, 2009. Sidaa darteed dib-u-dhaca ku yimi in Madaxweynaha la doorto kursiga ku fadhiisto waa 57 cisho.
TALO BIXIN GUUD:
“Gacmo Geel Jire kor looma Maydho”
1: waa odhaah aynu leenahay oo tixgalinteeda mudan maanta oo kale. Sidaa darteed, Komishanka iyo saddexda Xisbi Qaran waxaanu ku gubaabinaynaa inay tixgelin gaar ah siiyaan duruufaha aan wax siyaasad ah ku lug lahayn ee dib-u-dhaca ku keenay doorashada. Dadweynuhu waa inuu cawil celinta arrintaasi leedahay. Waxa iyana codsi naga ah in Axsaabtu soo nooleeyaan wada shaqayntii ka dhexeysay iyo tii Komishanka la lahaayeen si loo babdbaadiyo dalka iyo dadka.
2: Waa in Xisbiyada iyo Xukuumaduba fuliyaan awaamiirta ka soo baxda Komishanka ee la xidhiidha ololaha siyaasiga ah iyo hab u socodka doorashada, awooddaas oo sharcigu Komishanka siinayo.
3: waa in Komishanku u gacan banaanaadaa qaybinta wakhtiga baahinta (Air Time-ka ) ah ee loo qoondeeyo saddexda Xisbi qaran marka ololuhu bilaabmo inay ka helaan TV_ga iyo Radiyowga Qaranka. Madaxda Wasaardda Warfaafinta iyo cid kale toona waa inaanay arritnaa faro glein ku yeelan.
TALLO BIXIN GAARA AH:
Komishanku waa inaanu la aamusin dhaliilaha jira. Ciddii lehna waa inuu dusha ka saaraa.
ii) Komishanku waa inuu shacbiga ogeysiiyaa doorka Interpeace ay ku leedahay hawlaha socda ee la xidhiidha doorashda.
iii) Komishanku waa inuu si dhakhso leh u daba galaa Baarlamaanka si loo dhamyastiro shuruucda la xidhiidha hab codbixintan cusub.
iv) Waa in si deg deg ah Komishanka u bilaabaa wacyi-gelintii codbixinta oo meel mar ah kana digtoonaadaa inay lunto sidii tii diiwaan-gelinta.
2) SADDEXDA XISBI QARAN
1. Waa in la joojiyaa ololaha doorashda ee xiligiisa ka horreeya.
2. Waa in Axsaabtu u tudhaan shacbiga iyo Dalkaba oo had iyo jeer dantooda gaarnimo dib u dhigtaan, kana gaabsadaan wixii dalka khalkhal gelin kara.
3. Waa in axsaabtu fuliso heshiisyada dhexmara oo iska ilaaliyaan ta iman doonta ee ah “nimankaa waxay wada dhigteen ku heshiin waayay ballan gaar ahna dadka u fulin maayaan”.
4. Waa in heshiiskii 29/4/2008 sidiisa loo hirgeliyo.
5. Waxaanu dhiiri gelinaynaa in madaxda Axsaabta ee u tartamaya jagooyinka Madaxweynaha iyo ku Xigeenskiisa hormood ka noqdaan ololaha doorashada si xidhiidh toos ah ay daweynaha ula yeeshaashaan barnaamijkoodana loo ogaado.
6. Axsaabta si ay khaladkoodii hore u saxaan waa inay olole cusub qaadaan oo muwaadinka ka dhaadhicayaan inuu leeyahay hal cod oo keliya goob keliyana ka dhiiban karo.
1. Waxaan Xukuumadda ku adkaynaynaa inay si buuxda u sugto nabadgelyada xilliga iyo muddada doorashadu socoto, ciidamaduna si xilkasnimo ah sharciga au xurmeeyaan.
2. Xisbal Xaakimku waa inuu yeesho hab dadweynuhu ku kala saaro cidda Xukuumadda hawsha qaran u haysa iyo hawl-wadeenada Xisbiga UDUB.
1. Si warbaahintu ficil ahaan u muujiso inay tahay awoodda afraad una hesho kalsoonida shacbiga waa inay dhexdhexaadnimadooda ilaaliyaan oo aanay ku milmin siyaasadda axsaabta waa inaanay cod-xoojiye u noqon qof, koox ama xisbi.
2. Komishanku waa inuu suxufiyiinta ugu talo galo tababarro iyo workshops si kor loogu qaado wacyigooda guud ee ku aaddan xilliga doorashada.
W axaanu deeq-bixiyeyaasha ku adkaynaynaa inay barnaamij cad ka yeehsaan sidii Komishanka awooddiisa kor loogu qaadi lahaa si ay u meel marto madax banaanidoodu.
Waa in ay kaalintooda ka qaataan sii xoojinta nabadgelyada iskana ilaaliyaan hiye raaca iyo beer-laxawsiga siyaasiinta.